Followers Questions – SAGARWINE
Ask KO YE
Home/ KO YE/Followers Questions
Ye Tay Zar Shein
We can build together
Asked: 19 Jan 2021 In: ပဟေဠိ
Asked: 16 Dec 2020 In: ပညာရေး
I feel very ____________. I’m going to go to bed!
__________________apiece of cake? No, thank you.
Asked: 16 Dec 2020 In: ပဟေဠိ
When I was 4, my sister was 2. I’m now 44. How old is my sister?
Asked: 21 Nov 2020 In: ပဟေဠိ
အရောင်မတူတဲ့ အိမ် ၅ အိမ်မှာ လူမျိုး ၅မျိုးနေပြီး မတူတဲ့အကောင် တစ်ကောင်စီကို မွေးထားကြတယ်။ သူတို့ဟာ မတူတဲ့ဆေးလိပ်နဲ့ အရည်တွေကို သောက်ကြတယ်။ (၁) အင်္ဂလိပ်လူမျိုးက အနီရောင်အိမ်မှာနေတယ်။ (၂) ဆွီဒင်လူမျိုးက ခွေးမွေးထားတယ်။ (၃) ဒိန်းမတ်လူမျိုးက လက်ဖက်ရည်သောက်တယ်။ (၄) အဖြူရောင်အိမ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ အစိမ်းရောင်အိမ်ရှိတယ်။ (၅) အစိမ်းရောင် အိမ်ပိုင်ရှင်က ကော်ဖီသောက်တယ်။ (၆) pall တံဆိပ်ဆေးလိပ်သောက်သူက ငှက်မွေးတယ်။ (၇) အဝါရောင် အိမ်ပိုင်ရှင်က dunhill သောက်တယ်။ (၈) အလယ်အိမ်က နွားနို့သောက်တယ်။ (၉) နော်ဝေးလူမျိုးက ပထမတစ်အိမ်မှာနေတယ်။ (၁ဝ) blend တံဆိပ် ဆေးလိပ်သောက်သူက ကြောင်မွေးထားသူရဲ့ အိမ်ဘေးမှာနေတယ်။ (၁၁) ...Read more
အရောင်မတူတဲ့ အိမ် ၅ အိမ်မှာ
လူမျိုး ၅မျိုးနေပြီး မတူတဲ့အကောင် တစ်ကောင်စီကို မွေးထားကြတယ်။ သူတို့ဟာ မတူတဲ့ဆေးလိပ်နဲ့ အရည်တွေကို သောက်ကြတယ်။
(၁) အင်္ဂလိပ်လူမျိုးက အနီရောင်အိမ်မှာနေတယ်။
(၂) ဆွီဒင်လူမျိုးက ခွေးမွေးထားတယ်။
(၃) ဒိန်းမတ်လူမျိုးက လက်ဖက်ရည်သောက်တယ်။
(၄) အဖြူရောင်အိမ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ အစိမ်းရောင်အိမ်ရှိတယ်။
(၅) အစိမ်းရောင် အိမ်ပိုင်ရှင်က ကော်ဖီသောက်တယ်။
(၆) pall တံဆိပ်ဆေးလိပ်သောက်သူက ငှက်မွေးတယ်။
(၇) အဝါရောင် အိမ်ပိုင်ရှင်က dunhill သောက်တယ်။
(၈) အလယ်အိမ်က နွားနို့သောက်တယ်။
(၉) နော်ဝေးလူမျိုးက ပထမတစ်အိမ်မှာနေတယ်။
(၁ဝ) blend တံဆိပ် ဆေးလိပ်သောက်သူက ကြောင်မွေးထားသူရဲ့ အိမ်ဘေးမှာနေတယ်။
(၁၁) မြင်းမွေးထားသူရဲ့ ဘေးမှာ dunhill သောက်သူနေတယ်။
(၁၂) Blue Master ဆေးလိပ်သောက်သူက ဘီယာသောက်တယ်။
(၁၃) ဂျာမဏီလူမျိုးက prince တံဆိပ်ဆေးလိပ်သောက်တယ်။
(၁၄) နော်ဝေးလူမျိုးက အပြာရောင် အိမ်ဘေးမှာနေတယ်။
(၁၅) ရေပဲသောက်တဲ့လူက blend ဆေးလိပ်သောက်သူရဲ့ ဘေးမှာနေတယ်။
Asked: 13 Nov 2020 In: နိုင်ငံရေး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ( ၂၀၀၈ ခုနှစ် ) ကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ဥပဒေ
Download Link – ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ( ၂၀၀၈ ခုနှစ် ) ကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေ ( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )
Download Link – ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ( ၂၀၀၈ ခုနှစ် ) ကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေ
( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )
Download Link – နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )
Download Link – နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ
( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ
Download Link – တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )
Download Link – တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ
( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )
Download Link – အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )
Download Link – အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ
Asked: 12 Nov 2020 In: နိုင်ငံရေး
Download Link – ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )
Download Link – ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ
Best Answers 6
မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ စာအုပ်ကို ဘယ်မှာ ရနိုင်မလဲ
အိမ်မှမထွက်မီ မောင်ဘ၌ ငွေမည်မျှ ရှိသနည်း။
ဒီ တီရှပ်မှာ အပေါက်ဘယ်နှစ် ပေါက် ရှိပါသလဲ?
How many viss in 1 liter?
စာဖတ်ခန်းထဲက လူသတ်မှု တရားခံကို ဝိုင်းပြီးတော့ ဖော်ထုတ်ကြည့်ပေးပါဦး
Ye Tay Zar Shein added an answer 8 14 Jul 2021 at 10:32 AM
Hardeep RosnBrickson added an answer301 Jul 2021 at 4:28 PM
Ye Tay Zar Shein added an answer Correct 21 Nov 2020 at 9:45 AM
KO YE added an answer လက်ရှိငွေ =၁၀ ကျပ် အိမ်မပြန်ခင်ရှိငွေ =၂၀ ကျပ် ညစာထမင်းဖိုးမရှင်းခင်ရှိငွေ =၄၀ ကျပ် ညစာထမ်းမစားခင်ရှိငွေ… 21 Nov 2020 at 9:44 AM
Ye Tay Zar Shein added an answer ကျွန်တော် အိမ်အပြင်က စောင့်နေပါတယ်။ ပါမောက္ခရဲ့ စာဖတ်ခန်းအပြင်က ဖြတ်သွားတဲ့အခါ သူက ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို ထုတ်ပြီး နဖူးနဲ့တေ့ကာ… 17 Nov 2020 at 8:05 PM
2020 apple backend business covid covid-19 covid19 developer election eye test framework industry iot iphone language law marketing mpt myanmar mytel nld ooredoo placement poll programmer programming question quiz solar telenor test uec uec2020 usa usdp vaccines စကားထာ
Phyo Htet Kyaw
business (3) covid (1) covid19 (1) developer (2) election (8) law (2) myanmar (7) placement (2) poll (1) quiz (8) test (2) uec (6)
Knowledge is having the right answer. Intelligence is asking the right question.
© 2021 Sagarwine. All Rights Reserved.